Madasha Badbaado Qaran oo Fariin u diray Golaha Ammaanka ee QM | Banaadir Times
HomeUncategorisedMadasha Badbaado Qaran oo Fariin u diray Golaha Ammaanka ee QM
Madasha Badbaado Qaran oo Fariin u diray Golaha Ammaanka ee QM
Madasha badbaado qaran oo ay ku midoobeen siyaasiyiinta mucaaradka iyo madaxda maamulada Puntland iyo Jubaland ayaa fariin u diray golaha ammaanka ee Qaramada midoobay xiili lagu wado inay maanta ka shiraan arrimaha siyaasadda Soomaaliya.
Madasha Badbaadada Qaran ayaa warqad ay direen Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay waxay ku xuseen sida ay uga soo horjeedan muddo kordhintii Golaha Shacabka Soomaaliya ay ku ansixiyeen qaraar labo sano ah iyo khilaafka ka taagan.
Waxaa ay qoraalkooda ku dalbadeen in fariintooda laga hor aqriyo golaha hortooda si loo soo bandhgo in uu cad yahay mowqifkooda ku aadan Go’anka ay golaha Shacabka mudada ugu krdhiyeen Madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi farmaajo.
“Go’aanka ka soo baxay Aqalka Hoose ee Baarlamaanka oo ay ku kororsadeen shaqadooda iyo tan madaxweynaha laba sano waa waxba kama jiraan, khatar ku yahay xasilloonida, nabadda iyo midnimada Soomaaliya iyo tan dadka Soomaaliyeed ayaa lag yiri” Qoraalka Madasha badbaadada Qaran.
Wadahadaladii ugu dambeeyay ee ka socday teendhada Afisiyoone ayaa natiijo la’aan ku so dhamaaday markii dhinacyadu ay isku afgaran waayeen hannaanka wada xaajoodka, wax tanaasul ahna la heli waayay.
Previous articlePuntland oo soo saartay go’aan lagu mamnuucayo jarista dhirta
Next articleSoomaaliya oo kaalin hoose ka gashay ilaalinta Xuquuqda Suxufiyiinta